Dhimasho & dhaawac ka dhashay kadib maleeshiyo beeleed ku Dagaalamey gobalka Afdheer ee Dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Dhimasho & dhaawac ka dhashay kadib maleeshiyo beeleed ku Dagaalamey gobalka Afdheer...
Dhimasho & dhaawac ka dhashay kadib maleeshiyo beeleed ku Dagaalamey gobalka Afdheer ee Dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya.
Faah faahino dheeraad ah ayaa waxaa ay kasoo baxayaan dagaal geystay khasaaro kala duwan oo laba maleeshiyo beeleed ku dhex-marey tuulada Hareeri ee hoostagta degmada Jarati ee gobalka Afdheer ee Dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya.
Maleeshiyaadka dagaalamay ayaa la sheegay inay isku heystaan dhul halkaasi ku yaalla,waxaana la sheegay in dagaalkaas uu sababay dhimashada Afar ruux iyo dhaawaca 20,kuwaas oo isugu jira Shacab iyo maleeshiyaadka dagaalamay.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in Ciidamo katirsan kuwa Dowlad deegaanka ee Liyuu Boolis ay gaareen deegaanka lagu dagaalamay, kuwaas oo ku guulaystay in ay kala dhex galaan maleeshiyaadka labada beelood ee dagaalamay.
Xaalada Goobta lagu dagaalamay ayaa haatan ah mid degan walow dadka deegaanka ay sheegeen qaarkood inay cabsi dareemayaan maadama ay weli ishor-fadhiyaan maleeshiyaadka dagaalamay.